तपाइँको वेब २.० लोगो बनाउनुहोस् Martech Zone
एकदमै हासोलाग्दो। यहाँ आफ्नै वेब २.० लोगो बनाउनुहोस् (अद्यावधिक: साइट अब उपलब्ध छैन)। मैले यो पीटर ग्लाइमानको ब्लगमा पाए।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 7::2006० अपराह्न
त्यो एक राम्रो र हास्यास्पद पृष्ठ हो। तिनीहरूसँग पनि छ - उस्तै डिजाइनमा - एक वेबकलोक। मैले देखेको अरू कसैलाई पिट्छु (यद्यपि मैले किन बुझेको छैन किन कोहीले पनि उनीहरूको वेबसाइटमा घडी पोष्ट गर्ने…)
सेप्टेम्बर 8, 2006 मा 9: 31 AM
मैले आफ्नो ब्ल्गमा ती मध्येका २ लोगो बनाएँ
सेवा यस क्षणको लागि तल देखिन्छ, तर यहाँ एक हास्यास्पद वेब २.० बुलशिट जेनेरेटर छ।
र तपाईंले याद गर्नुभयो कि एरिक (केवल कुनै एरिक होइन, तर _ मेरो_ब्लगलग एरिक तपाईको साइटमा आएको हो? तपाई प्रसिद्ध हुनुहुन्छ!)
मार्टिन, महान छ!
एरिक र रोबर्ट Scoble (Scobleizer बाट) एक दिनमा!
चीजहरू अझ खराब हुँदै गयो, अब त्यहाँ केवल 404०XNUMX त्रुटि छ। बग्गर, मसँग वास्तवमै राम्रो विचार थियो जहाँ मैले त्यो प्रभाव प्रयोग गर्न सक्दछु।
ठीक छ, इन्टरनेट is एक तरल पदार्थ।
सबै प्रेरणाको लागि धन्यवाद - स्मार्ट पृष्ठ केवल पृष्ठको पृष्ठमा मा मेरो ब्लग समुदाय लोड गर्न को लागी।
धन्यवाद, मार्टिन! मैले प्रविष्टि परिमार्जन गरेको छु। RE: म साइडबारसँग खेल्दै छु अझ प्रभावकारिताको लागि। MyBlogLog जाभास्क्रिप्ट अझै फुटरमा छ - त्यसैले ती ब्लगरहरू भ्रमण गर्ने अझै पनी गृह पृष्ठमा पहिचान गरिएको छ, तर म तिनीहरूको पृष्ठहरू ढिला गर्न चाहान्दिन यदि तिनीहरूको सेवा ढिलो चलिरहेको छ भने।